Bachaza ngokungaqokwa kukaKhuzani kumaSama 27
UKHUZANI ugile izimaga ngeJele nyakenye kodwa akaqokwanga kumaSama Isithombe: FACEBOOK
Charles Khuzwayo | June 14, 2021
ABAHLELI bomcimbi wezindondo zomculo omkhulu kunayo yonke eNingizimu Afrika, iSouth African Music Awards (Sama), bageqa amagula ngembangela yokushaywa ngesithende kwesilomo sikamaskandi, uKhuzani "Indlamlenze" Mpungose.
Kuzokhunjulwa ukuthi uKhuzani ugile izimanga nyakenye nge-albhamu yakhe yakamuva esihloko sithi Ijele. Nengoma afolose ngayo kule albhamu, Ijele, iqophe umlando.
Ngaleli cwecwe uqokwe kumaKZN Entertainment Awards, wahlabana ngomklomelo omkhulukazi weBest Maskandi, obuhambisana nesamba sika-R500 000 weKZN Most Loved Artist. Ijele lithe nje liphuma laliculwa yinqwaba yabantu ngisho nangosaziwayo abahlonishwayo naphesheya kwezilwandle, uDJ Tira noBlack Coffee. Ngisho noNdunankulu waKwaZulu-Natal, uMhlonishwa uSihle Zikalala, ushayele uKhuzani elikhulu ihlombe ngaleli noni osekugidwa ngalo nasemakhaya.
Leli culo, eselifana nehubo lesizwe kumaskandi, libuye laqopha umlando ngokuhlukanisa unyaka oKhozini FM ngamavoti acela ku-1 million. Wabe eseqopha umlando ngokuba wumaskandi wokuqala ukunandisa ezinhlelweni zezemidlalo, [email protected] (SABC 1) nakwiHomeground (Mzansi Magic).
Le mpumelelo yenze noMasipala waseNkandla, okuyindawo adabuka kuyo uKhuzani njengoba engowaseMandaba, wamhlonipha ngesikhumba, isigingci nendondo ngenxa yamagalelo akhe ekuqhakambiseni le ndawo.
Nakuba kunjalo kodwa uKhuzani akabonakalanga nangokhalo kumaSama ekubeni ubelindeleke emnxeni weBest Maskandi, Best Collaboration, Best Male, Best Album nakwiRecord of the Year, obekuzomenza umaskandi wokuqala ukungena nokuhlabana uma ephumelela.
Ebuzwa ukuthi ubengenelile yini, uKhuzani wenqabile ukuphawula kodwa wathembisa ukubeka uvo lwakhe emuva kokuba sekuphawule abamaSama.
Okhulumela amaSama, uComfort Nkosi, ukuqinisekisile ukuthi uKhuzani ubengenelile kwiBest Maskandi Album kuphela kodwa wangaqokwa. Kunalokho kuqokwe uPhuzekhemisi ngecwecwe elithi Ziyangiluma Izinja, Imithente ngelithi Banathi Shaqa, Abafana BakaMgqumeni ngelithi Imfene Kamakhelwane, Ichwane Lebhaca ngelithi AmaGupta noThokozani Langa ngelithi Iqatha Eliziqobayo.
Echaza ngokushiywa ngaphandle kukaKhuzani, uComfort uthe iciko liqokwa ngenxa yamaphuzu amaningi eliwanikwa ongoti bamajaji kulowo munxa.
"Kuqaphele ukuthi udumo aluthi shu uma sijaja abazongenela amaSama. Inkundla isuke ilingana futhi wonke umculi unikezwa ithuba elenele nelilinganayo nelabanye uma kujajwa," usho kanje.
Uthe amaciko angadlalwa emisakazweni noma anganandisi emicimbini emikhulu aphathwa ngendlela elinganayo nozakwabo abadumile.
"Ekugcineni kumayelana nezinga lomsebenzi ophrojusiwe nokuthi ongoti bethu babanikeza maphi amaphuzu abangenele.
Sihalalisela abaqokiwe kwiBest Maskandi futhi sibafisela okuhle kodwa kumaSama 27," kuphetha uComfort.